SomaliTalk.com » 2014 » March » 14
Home » Archive Maalinta March 14th, 2014
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo soo dhoweeyay Warmurtiyeedka kasoo baxay shirweyanaha aan caadiga ahayn ee Madaxweynayaasha Urur Goboleedka IGAD.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa u qornaa sidan: 13th March 2013 Addis Ababa, Ethiopia Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka qaybgalay Shirweynaha 25aad ee aan caadiga ahayn ee Madaxweynayaasha Urur Goboleedka IGAD ee maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa soo dhoweeyay taageerada loo fidiyay dalka Soomaaliya iyo heshiiska Koonfurta...
Muqdisho Dhufeysyo Badanaa !!
Markii uu waagu baryey waxaan u soo dhaqaaqey Goobteydii Shaqada waxaan arkey Dad meel ku Xoosan oo isugu jiro Odoyaal, Haween, Dhalinyaro iyo Caruur kuwaas oo Laba laba u Faqaya, waxay ka Sheekeysnayaan Guri ku dhow Deegaankooda oo lagu Wareejinayo Dhagaxaanta Waa weyn oo Muqdisho looga Caadeystey in la isaga Difaaco Weerada iyo Qaraxyada , dadka waxay ka Wal Walsanaayeen sida ay u Maareyn...
Sheikh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo soo Dhaweeyey Go’aankii Qaramada Midoobey uga qaadey Xayiraada.
Sheikh Axmed Nuur Cali Jimcaale Madaxii Shirkaddii Barakaat ayaa soo dhaweeyay go’aankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu Xayiraaddii uga qaaday dhaq dhaqaaqiisii Hantiyeed iyoXayiraddii dhinaca Safarada ka saarneed. Jimcaale oo la hadlayay Warbaahinta ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay Seddax iyo Toban Sanno kaddib in laga qaado Xayiradii Saarneed Hantidiisii iyo tii uu u hayay...